Shaashadda Galaxy S7 ayaa daadatay. Download iyaga! | Wararka IPhone
Shaashadda Galaxy S7 ayaa daadatay. Download iyaga!
Muddooyinkii dambe, waxay umuuqataa inaysan jirin shirkad tiknoolajiyad weyn oo sirteeda qarsoodi ah ilaalin karta ilaa maalinta ay tahay in lasoo bandhigo. Aniguna waxaan idhi "waxay u muuqataa" maxaa yeelay waxay sidoo kale qayb ka noqon kartaa suuqgeynta. By "shaandhaynta" qaybo ka mid ah aaladda, waxa ay ku guuleystaan ​​ayaa ah inaan dooneyno xitaa ka hor inta aan la soo bandhigin. Wax yar ayaa ka hadhay soo bandhigida dadweynaha ee Samsung Galaxy S7 waxaana hore u jiray dhowr waji oo la sii daayay oo ku saabsan waxa uu noqon doono calanka soo socda ee webiga weyn ee Kuuriya.
Thanks to xogaha ugu dambeeyay waxaan awood u yeelanay inaan ogaano in Galaxy S7 ay dib uheli doonto caabbinta biyaha iyo inay adeegsan doonto baytari u ogolaan doonta inuu ciyaaro fiidiyoow qiyaastii 17 saacadood oo leh shaashadda ugu badnaan, taas oo ka dhigi doonta inta ugu badan qalab awood leh adduunka. Markii ugu dambeysay ee "daadatay", calaamadaha oraahda, ayaa ahaa fondos de pantalla in aad isticmaali doonto marka la soo gudbiyo. Xaqiiqdii maahan inay tahay qodob muhiim u ah aaladda, laakiin waxay horeyba noo heleen, markale, inay ka hadlaan wax aan weli la soo bandhigin.
Soo dejiso sawirrada Samsung Galaxy S7
Isugeyn, waxaan heysanaa 13 sawir-gacmeedyo ka badan 2000 x 2000 px midkiiba (dhammaantood isku cabir ma ahan). Waa kuwan kuwa aan aadka u jeclahay.
Galaxy S7 Asalka 1
Galaxy S7 Asalka 2
Galaxy S7 Asalka 3
Galaxy S7 Asalka 4
Xiriirinta soo socota waxaad ku wada wada leedahay hal faylka la duubay oo ku dhow 19mb. Cabirkooda awgiis, waxaad hubin kartaa inay sifiican ugu eegi doonaan qalabkaaga iOS-ka ah iyadoon loo eegin inuu yahay 5.5-inch, 4,7-inch, 4-inji iPhone ah ama iPad kasta ah. Dabcan, haddaad iska indhatirto inaad adeegsan doontid waraaqaha ranjiga ee xiga ee cadowga ugu dhow ee Apple Apple Maxaad u maleynaysaa sawirada Samsung Galaxy S7?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Shaashadda Galaxy S7 ayaa daadatay. Download iyaga!
Gali bog la yiraahdo "iphone news" oo ka eeg warka ka soo baxa samsung ee AAN DANAYN in.
Ku jawaab alexandro
Gali bog la yiraahdo "iphone news" oo arag war ka yimid samsung, ka dib ha aqrin.
Haddii aan doonayo inaan wax ka ogaado Samsung, waxaan aadi lahaa "Samsung news" ama Engadget ... runtii, qoraalladan aan shaqo ku lahayn Apple waxay ceeb ku tahay dadka kale.
ian wuu dhintay dijo
Ilaa iyo inta Samsung ay sii wadayso soo saarista processor-ka waa nalakala dhacay xusuusnow qaali
Haddii aysan ahayn iOS, maahan ... Salaan ka timid Chile
Ku jawaab ian osses
Haddii aysan ahayn iOS, ma heleysaa xorriyadda aad rabtay inaad tagto?
Ku jawaab Yomismo
Xitaa ma aadayo inaan faallo ka bixiyo waa war ka yimid Samsung, waxa iga qoslinaya ayaa ah xitaa goorma ayaan sii wadaynaa inaan ugu yeerno waxa aan ahayn "filtration". Horeba waxaa jiray erey la yiraahdo xayeysiinta xayeysiinta, ha ugu yeerin magac kale.
Waayadan dambe, waxay umuuqataa inaysan jirin shirkad tiknoolajiyad weyn ah oo sirteeda ilaalin karta ilaa maalinta ay tahay in lasoo bandhigo. Aniguna waxaan idhi "waxay u muuqataa" maxaa yeelay waxay sidoo kale qayb ka noqon kartaa suuqgeynta. “Shaandhaynta” qaybo ka mid ah qalabka […] »
Anigu waxaan ahay 100% Android (Samsung) laakiin xitaa sidaas darteed waxaan xiiseynayaa inaan wax ka ogaado Apple iyo noocyada kale, ha noolaado tartanka maxaa yeelay iyaga ayaa ugu mahadnaqaya inay shirkaduhu ikhtiraacaan ka-faa'iideystayaashuna waa annaga. Ha noqonin kuwa "neceb" wax walboo adiga way ku dhibayaan, iyagu had iyo jeer waa qallafsan yihiin.
Woooooo …… Ma jiraa qof wax ka yidhi 17 saacadood oo fiidiyoow ah? Oh aniga! Hagaag, waligey waxaan ahaa Apple, laakiin haddii waxa ay sheegaan ay run yihiin waxaan u maleynayaa inaan fursad siin doono Samsung-kan cusub, waxay noqon doontaa wax xiiso leh in la arko sida tikniyoolajiyaddu u socoto ee la xiriirta baytariyada.